आफ्नो कार लामो समय सम्म टिकाउने तरिका - Victor Mochere
स्क्र्यापेजमा गाडीको औसत उमेर १४ वर्षको आसपास छ भने सडकमा चल्ने सवारीको औसत उमेर ८ वर्षभन्दा नजिक छ। तर चिन्ता नगर्नुहोस्, त्यहाँ केही सरल कदमहरू छन् जुन तपाईंले आफ्नो मोटरलाई यसको सुनौलो वर्षमा पुग्ने उत्कृष्ट मौका दिन सक्नुहुन्छ। हामीले दौडने लागतहरू कम गर्न र तपाईंको कारलाई आगामी वर्षहरूमा सडकमा राख्नको लागि पालना गर्न सजिलो सुझावहरूको सूची कम्पाइल गरेका छौं।
1. आफ्नो कारको ब्याट्री कायम राख्नुहोस्
2. नियमित रूपमा फिल्टरहरू परिवर्तन गर्नुहोस्
3. सहज रूपमा ड्राइभ गर्नुहोस्... अधिकांश समय
4. आफ्नो वातानुकूलित प्रयोग गर्नुहोस्
5. स्पार्क प्लग र लिडहरू बदल्नुहोस्
६. नियमित रूपमा तरल पदार्थ टप अप गर्नुहोस्
7. आफ्नो टायर जाँच गर्नुहोस्
8. सेवा तालिकामा अडिग रहनुहोस्
10. वजन कम राख्नुहोस्
11. आफ्नो कार रस्ट-प्रूफ गर्नुहोस्
12. परिमार्जन गर्ने प्रलोभनको प्रतिरोध गर्नुहोस्
13. खाल्डाखुल्डी र कच्चा ट्र्याकहरूमा ड्राइभिङ नगर्नुहोस्
14. गियरहरू तल सार्नुको सट्टा गति कम गर्न आफ्नो ब्रेकहरू प्रयोग गर्नुहोस्
15. आफ्नो कार सफा राख्नुहोस्
१६. आफ्नो खुट्टा क्लचमा र हात गियरस्टिकमा नराख्नुहोस्
17. इन्धन कम नचल्नुहोस्
18. भागहरूमा स्क्रिप नगर्नुहोस्
19. आफ्नो चेतावनी बत्ती तुरुन्तै जाँच गर्नुहोस्
20. सरल र नियमित जाँच गर्नुहोस्
यदि तपाईंले लामो समयसम्म आफ्नो कार प्रयोग गर्नुभएन भने, ब्याट्री घट्नेछ र फ्ल्याट हुनेछ। यदि तपाईंको कार लामो समयसम्म ग्यारेजमा छाडिएको छ भने ब्याट्री माथि राख्न ट्रिकल चार्जर प्रयोग गर्नुहोस् वा यदि सामान्य भन्दा कम चार्ज भएको देखिन्छ भने ब्याट्री कन्डिसनर प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईंको ब्याट्री फ्ल्याट भयो भने, कार स्टार्ट गर्नुले ब्याट्रीमा थप तनाव दिन्छ र इन्जिन व्यवस्थापन प्रणाली र अन्य नाजुक इलेक्ट्रोनिक्सलाई हानि पुर्‍याउन सक्छ: बढेको पहिरनको दोहोरो झगडा। ट्रिकल चार्जर बिना आफ्नो ब्याट्रीको हेरचाह गर्न, तपाईंले सम्भव भएमा हप्तामा कम्तिमा एक पटक आफ्नो कार चलाउने प्रयास गर्नुपर्छ - विशेष गरी जाडोमा।
तपाईंको कारको तेल फिल्टर र एयर फिल्टर समयसँगै बन्द हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरूलाई नियमित रूपमा नवीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरूलाई निर्धारित कार सर्भिसिङको भागको रूपमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ, तर दुवै अपेक्षाकृत सरल कामहरू हुन् - विशेष गरी एयर फिल्टर स्वैप - त्यसैले तपाइँ यसलाई आफैं प्रयास गर्न र प्रक्रियामा पैसा बचत गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईले प्राय: यसलाई धुने गरेर एयर फिल्टरको आयु लम्ब्याउन सक्नुहुन्छ। फिल्टर सफाई र परिवर्तनहरू बारे सल्लाहको लागि आफ्नो ह्यान्डबुकलाई परामर्श गर्नुहोस्, र वास्तविक भागहरू प्रयोग गर्न निश्चित हुनुहोस्। सस्तो, खराब गुणस्तर फिल्टरहरूले लामो अवधिमा तपाईंको इन्जिनलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ।
'मेकानिकल सहानुभूति' को साथ ड्राइभिङ तपाईंले सधैं अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यसको मतलब तपाईंको कारको नियन्त्रणहरू प्रयोग गरेर यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसो गर्नाले कम्पोनेन्टको पहिरन कम हुनेछ र तपाईंले आफ्नो इन्धनलाई अझ बढी खर्च गर्नुहुनेछ। स्टीयरिङ ह्वील, गियरबक्स र पेडल सहज रूपमा प्रयोग गर्ने जस्ता साधारण कुराहरू मुख्य छन्, साथसाथै अचानक ब्रेक लगाउने आवश्यकतालाई कम गर्न अगाडि राम्रोसँग हेर्नु। हाम्रो गाइडमा इन्धन कसरी बचत गर्ने तपाईंको कार र यसको इन्धन अर्थतन्त्रबाट अधिकतम लाभ लिनको लागि तपाईंको ड्राइभिङ शैली सुधार गर्न थप धेरै सुझावहरू प्रदान गर्दछ।
तपाईं पेडलहरूमा जति धेरै आक्रामक हुनुहुन्छ तपाईंको इन्धन र मर्मत बिलहरू उच्च हुने सम्भावना छ। सहज रूपमा ड्राइभ गर्नु तपाईंको कार र वातावरणको लागि दयालु हुन्छ, साथै नियन्त्रित तरिकाले गति र ढिलो हुनु र अगाडिको बाटोको अनुमान गर्नुले तपाईंको इन्धन बिलमा नगद बचत गर्नेछ। त्यसले भन्यो, यदि तपाईंले आफ्नो इन्जिनलाई पूर्ण रूपमा पुन: प्राप्त गर्नुभएन भने, कार्बन निक्षेपहरूले भल्भहरू, इनटेक मेनिफोल्ड र अन्य भागहरू निर्माण गर्न र खराब गर्न सक्छ, दक्षता घटाउन सक्छ र सम्भावित रूपमा गलत फायर निम्त्याउन सक्छ।
त्यसकारण तपाईंले आफ्नो इन्जिनलाई कम्तिमा केही सय माइल/किलोमिटरमा एक पटक रातो रेखामा फर्कन अनुमति दिनुपर्छ - तर मात्र जब तेल न्यानो हुन्छ र तपाईं शान्त सडकमा हुनुहुन्छ। डिजेल कारहरूमा पनि डिजेल पार्टिक्युलेट फिल्टरहरू (DPFs) को समस्या हुन सक्छ, जुन हानिकारक निकास उत्सर्जनलाई रोक्न डिजाइन गरिएको हो। लामो राजमार्ग महिनामा एक पटक चलाउँदा तिनीहरूलाई खाली गर्न मद्दत गर्नेछ।
'यो प्रयोग गर्नुहोस् वा यसलाई हराउनुहोस्' वातानुकूलितमा लागू गर्न सकिने वाक्यांश हो। एयर-कन प्रणालीहरूले अनिवार्य रूपमा समयसँगै फ्रिज ग्यास चुहावट गर्छ, विशेष गरी यदि तिनीहरू नियमित रूपमा प्रयोग गरिएनन्। आफ्नो एयर कन्डिसन बन्द गर्नाले इन्धनको बचत हुन सक्छ, तर तपाईले यसको सट्टामा वातानुकूलित पुन: ग्यासिङको लागि बिल तिर्न सक्नुहुन्छ। र हो, यसको मतलब कहिलेकाहीँ चिसो मौसममा पनि तपाईंको भेन्ट्सलाई उडाउन दिनु हो।
कारहरू झन् जटिल बन्दै गएपछि, ड्राइभरहरू आफ्नै सर्भिसिङ गर्न कम इच्छुक हुन्छन्। यद्यपि, स्पार्क प्लगहरू र उच्च-तनाव लिडहरू प्रतिस्थापन गर्नु अर्को सरल काम हो जुन तपाईंले आफ्नो इन्जिनको कार्यसम्पादनलाई अनुकूलन गर्न आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस् कि तपाईंले सधैं आफ्नो सवारी साधन पुस्तिका पहिले नै परामर्श गर्नुपर्छ र यद्यपि सेवा तालिकामा टाँस्नुहोस्। स्पार्क प्लग निरीक्षण गर्दा, जाँच गर्नुहोस् कि यसमा छ:
हल्का खैरो इलेक्ट्रोड र इन्सुलेटर
पग्लिने कुनै संकेत छैन
पहिरन वा जम्माको कुनै संकेत छैन
खराब अवस्थामा स्पार्क प्लगले समयको साथमा पहिरनलाई संकेत गर्छ र बदल्न आवश्यक छ, वा तपाईंको इन्जिनको अवस्थालाई संकेत गर्न सक्छ। यदि प्लग अपेक्षाकृत नयाँ छ र इलेक्ट्रोड र इन्सुलेटर बीच एक महत्वपूर्ण अंतर विकास गरेको छ भने, त्यसपछि यो एक संकेत हुन सक्छ कि इन्जिन कम प्रदर्शन छ। यदि यो मामला हो भने, तपाईंले आफ्नो स्थानीय ग्यारेजलाई परामर्श गर्नुपर्छ। यदि सिसामा दरार छ वा भारी पहिरन को संकेत देखाउँछ भने, तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। हामी यसलाई पूरा गर्न सम्मानित ग्यारेज प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छौं, यद्यपि, यदि तपाईंसँग अनुभव छ र विश्वस्त महसुस गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो सवारी साधन पुस्तिकाको दिशानिर्देशहरू पालना गरेसम्म तपाईं आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। यो बिन्दु डिजेल कारहरूमा लागू हुँदैन किनभने तिनीहरू स्पार्क प्लगहरू प्रयोग गर्दैनन्।
तरल पदार्थहरू तपाईंको कारको जीवन रगत हुन् र तिनीहरूलाई पुनःपूर्ति गर्न असफल हुँदा गम्भीर परिणामहरू हुन सक्छन्। बोनट खोलेर (तपाईको कार लेभल ग्राउन्डमा) र डिपस्टिक हटाएर पन्ध्र दिनमा एक पटक आफ्नो इन्जिन तेल जाँच गर्नुहोस्। यसलाई र्यागले पुछ्नुहोस् त्यसपछि यसलाई डुबाउनुहोस्। जब यो फिर्ता आउँछ, तेलको स्तर न्यूनतम र अधिकतम मार्करहरू बीच हुनुपर्छ - र यदि तपाईंको कारमा पेट्रोल इन्जिन छ भने हल्का पहेंलो-खैरो रंगको हुनुपर्छ। गाढा, फोहोर तेल प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ।
यद्यपि, डिजेल इन्जिन तेलले सामान्य दहन प्रक्रियाको भागको रूपमा कालिलो जम्मा गर्छ, त्यसैले गाढा रङको तेल डिजेल कारको साथ अलार्मको कारण होइन। पाक्षिक रूपमा जाँच गर्ने अन्य क्षेत्रहरूमा शीतलक भण्डार समावेश छ, जसलाई तपाईंले 50% डिस्टिल्ड पानी र 50% एन्टिफ्रिज, र विन्डस्क्रिन धुने बोतलको साथ माथि गर्नुपर्छ। हामी पछिको लागि पसलले किनेको स्क्रिनवाश सिफारिस गर्छौं। धुने-अप तरल प्रयोग गर्न प्रलोभन नगर्नुहोस् किनभने यसमा नुन र अन्य additives समावेश गर्दछ जसले पेन्टवर्कलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ।
टायरहरू निश्चित रूपमा तपाईंको कारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुरक्षा विशेषता हुन् र तिनीहरूलाई नियमित रूपमा जाँच गर्नाले - हप्तामा एक पटक - तपाईंको जीवन बचाउन सक्छ भनेर भन्न कुनै अतिरञ्जन छैन। अन्डर-फ्लाटेड टायरहरूले पनि इन्धन खपत बढाउनेछ, त्यसैले पैसा बचत गर्नको लागि तिनीहरूलाई तपाईंको कारको ह्यान्डबुकमा सूचीबद्ध सिफारिस गरिएका दबाबहरूमा माथि राख्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, अगाडि र पछाडिका टायरहरूमा टायरको दबाब फरक हुन सक्छ। केही विज्ञहरूले टायरको आयु लम्ब्याउन र टायरको आयु लम्ब्याउनका लागि टायरहरू घुमाउन सुझाव दिन्छन् (अर्थात अगाडिको भागलाई पछाडि साटासाट गर्ने र त्यसको विपरित)।
यद्यपि, सुरक्षाको हितमा, हामी पछाडिको एक्सलमा कम नदेखिने टायरहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छौं, किनकि अगाडिको ग्रिप (अन्डरस्टेर) गुमाउनु पछाडिको स्लाइड (ओभरस्टेर) भन्दा व्यवस्थापन गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। आफ्नो टायरमा ट्रेडको स्तर नियमित रूपमा जाँच गर्नुहोस् - तपाईंले तिनीहरूलाई 2mm र 3mm बीचको हुँदा परिवर्तन गर्ने बारे सोच्नुपर्छ - तपाईंसँग जति कम ट्रेड हुन्छ, टायर त्यति प्रभावकारी हुन्छ। र टायरको प्रेसर पनि जाँच्न नबिर्सनुहोस्, र ब्लो-आउट हुन सक्ने पहिरन वा क्षतिको संकेतहरू हेर्नुहोस्।
तपाईंको कारलाई टिप-टप अवस्थामा राख्न र यसको आयु लम्ब्याउनको लागि नियमित सर्भिसिङ महत्त्वपूर्ण छ। सेवा अन्तरालहरू समय वा माइलमा आधारित हुन्छन् - वर्षमा एक पटक वा प्रत्येक १०,००० माइल (१६,०९३ किमी), उदाहरणका लागि। तपाईको कारले कहिले सेवा दिने हो र कुन काम आवश्यक छ भनेर पत्ता लगाउन ह्यान्डबुक जाँच गर्नुहोस्। धेरै आधुनिक कारहरूमा ड्यासबोर्डमा चेतावनी बत्तीहरू छन् जब तपाईंलाई मर्मत आवश्यक पर्दा सचेत गराउँछ। व्यापक रूपमा भन्नुपर्दा, तपाईंले वर्षमा एक पटक 'सानो' सेवा र प्रत्येक दुई वा तीन वर्षमा 'प्रमुख' सेवाको लागि बजेट गर्नुपर्छ। एउटा सानो सेवाले तेल र तेल फिल्टर परिवर्तन गर्ने, र आवश्यक भएमा अन्य तरल पदार्थहरू बदल्ने समावेश गर्दछ।
कार र माइलेजको आधारमा, प्रमुख सेवाले एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग र क्याम्बेल्टको प्रतिस्थापनलाई पनि कभर गर्न सक्छ। सानो सेवामा पनि समावेश गरिएका कार्यहरूको संख्या धेरै छ, तर सबैमा तेल र तरल पदार्थ चुहावट, टायरको दबाब र अवस्था, अत्यधिक निकास उत्सर्जन, ब्रेक लगाउने, र स्टेयरिङ, गियरबक्स, क्लच, सस्पेन्सनको सही सञ्चालन समावेश हुनुपर्छ। बत्ती, वाइपर र हर्न। यो आधारभूत सुनिन्छ तर आफ्नो कारको सर्भिसिङको शीर्षमा राख्नु भनेको आफ्नो कारबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन र विश्वसनीयता कायम राख्न तपाईंले गर्न सक्ने उत्तम कुरा हो। वार्षिक सेवामा लगानीले तपाईंलाई मर्मत बिलहरूमा नगद बचत गर्नेछ र सम्भावित रूपमा तनावपूर्ण ब्रेकडाउनबाट बच्न सक्छ।
हामी मध्ये धेरैसँग ग्यारेजहरू छन्, तर कतिले वास्तवमा तिनीहरूलाई प्रयोग गर्छन्? ठीक छ, हामी यसलाई दोहोर्याउनेछौं: तिनीहरूमा कतिवटा कारहरू भण्डारण गर्छन्? कारहरू ठूला र अधिक जंग-प्रतिरोधी हुँदै जाँदा, धेरै जसो ड्राइभवे वा सडकमा छोडिन्छन्, ग्यारेज प्रभावकारी रूपमा माउन्ट वा बगैंचा शेडको विस्तार बन्न पुग्छ। ठीक छ, यसलाई स्पष्ट-आउटको लागि तपाईंको बहानालाई विचार गर्नुहोस्। तपाईंको कारलाई ग्यारेजमा पार्क गर्दा यसलाई सुक्खा, सफा र सुरक्षित राख्छ, दुर्घटनात्मक क्षति, तोडफोड र चोरीको जोखिम कम गर्छ। यसले तपाईंको बीमा प्रिमियम पनि कटौती गर्न सक्छ। यदि तपाइँसँग ग्यारेजको प्रयोग छैन भने, यसको सट्टामा उच्च गुणस्तरको कार कभर किन्ने विचार गर्नुहोस् - विशेष गरी यदि तपाइँ लामो समयको लागि आफ्नो कार पार्क छोड्नुहुन्छ भने।
मोटर उत्पादकहरूले लगातार आफ्नो सवारी साधनको तौल घटाउने उपायहरू प्रति गैलन माइल बढाउन र उत्सर्जन आवश्यकताहरू पूरा गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसैले सम्भव भएसम्म तपाईको कारले बोकेको तौललाई न्यूनतममा राख्नु तपाईको लागि धेरै अर्थपूर्ण हुन्छ। अतिरिक्त तौल बोक्नु भनेको तपाईंको कारको इन्धनको अर्थतन्त्रलाई कम गर्ने निश्चित तरिका हो। तपाईंले आफ्नो टायर, ब्रेक र सस्पेन्सनमा थप हार-फुलहरू पनि राख्नुहुनेछ। एक व्यावहारिक समाधान कारबाट कुनै पनि अनावश्यक वस्तुहरू हटाउन मात्र हो। ढोकाको जेब र ग्लोभबक्सबाट सुरु गर्नुहोस्, त्यसपछि कुनै पनि आवारा खेलौना वा पेय बोतलहरूको लागि सिट मुनि हेर्नुहोस्।
बुटमा सर्दै, तपाईलाई नचाहिने सबै चीजहरू खाली गर्नुहोस्। आपतकालिन अवस्थामा टुलकिट, ज्याक र लकिङ व्हील नट कुञ्जी छोड्न सम्झनुहोस्। यो त्यहाँ एक ब्रेकडाउन किट राख्न को लागी एक राम्रो विचार हो केवल यदि तपाई टुटेको लागि पर्याप्त अशुभ हुनुहुन्छ भने। आवश्यक नहुँदा आफ्नो कारमा भारी बोक्ने र खुकुलो वस्तुहरू नराख्नुहोस् र पारिवारिक बिदा वा लामो यात्राको लागि आफ्नो कार प्याक गर्दा सावधानीपूर्वक ध्यान दिनुहोस्। र सामान र्याकहरू र छत बारहरू हटाउन नबिर्सनुहोस् जब तपाईंलाई आवश्यक पर्दैन किनभने तिनीहरूले तपाईंको कारमा ड्र्यागमा उल्लेखनीय रूपमा थप्नेछन् र इन्धन खपत बढाउनेछन्।
आधुनिक कारहरू धेरै खिया-प्रतिरोधी छन्, तर धातु क्षरण 1990s वा अघि निर्माण वाहनहरूको नम्बर-एक हत्यारा हो। एकचोटि यो सेट भएपछि, धेरैले मर्मत गर्न किफायती हुने छैनन्। यदि तपाईंले आफ्नो कारमा खियाको दागहरू देख्नुभयो भने, तिनीहरूको विकासको लागि पर्खनुहोस् - कम्तिमा, यसलाई व्यावसायिक रूपमा पुन: स्प्रे गर्नु अघि टच-अप पेन्टले खुला शरीरको कामलाई छोप्नुहोस्। तपाईंको कारको अगाडि ढुङ्गा-डिफ्लेक्टिंग फिलिम लागू गर्नाले पेन्टवर्कको क्षतिलाई पहिलो स्थानमा रोक्न सक्छ। तपाईले चेसिसलाई राम्ररी रस्ट-प्रूफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा पानी प्रवेश रोक्नको लागि डिजाइन गरिएको मोमी पदार्थले गुफाहरू भर्नु समावेश छ। यहाँका सबै सुझावहरू जस्तै, यसले तपाईंलाई लामो समयसम्म पैसा बचत गर्न सक्छ।
आफ्नो कार परिमार्जन गर्नाले यसलाई कम भरपर्दो बनाउन र यसको आयु छोटो पार्ने सम्भावना छ। अधिक पावरको लागि इन्जिनलाई ट्युन गर्दा ब्रेकहरू सहित अन्य कम्पोनेन्टहरूमा अतिरिक्त तनाव हुन्छ यदि तपाईंले परिणामको रूपमा छिटो ड्राइभ गर्नुभयो भने। कडा, स्पोर्टियर सस्पेन्सनले चेसिस, सबफ्रेम र झाडीहरूमा थप पहिरन पनि निम्त्याउँछ। यो पनि सम्झनुहोस्, परिमार्जनहरूमा खर्च गरिएको पैसाले तपाईंको कारको मूल्य बढाउने छैन। वास्तवमा, विपरित अक्सर सत्य छ। मूल्यह्रास प्रायः कार चलाउँदा सबैभन्दा ठूलो लागत भएको हुनाले, पुनर्विक्रय मूल्य घटाउनुलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन।
खाडलहरूले तपाईंको निलम्बन, टायर र निकासमा विनाश पार्छ। खराब मर्मत गरिएका सडकहरूमा पाइने कडा किनाराहरूले साइडवाल बल्जहरू निम्त्याउन सक्छ, टायर अलग गर्न सक्छ र केही अवस्थामा तिनीहरूले टायरहरू पनि डिफ्लेट गर्न सक्छन्। क्रेटर-जस्तो प्वालहरूमा ड्राइभ गर्दा, निलम्बन गलत हुन सक्छ र झटका क्षतिग्रस्त हुन सक्छ। गहिरो प्वालहरूले उत्प्रेरक कन्भर्टरहरू पनि स्क्र्याप गर्न सक्छ जसले प्वालहरू र शक्तिको हानि निम्त्याउँछ। जहाँ सम्भव छ, चिल्लो सतहहरू भएका सडकहरू लुकाउनबाट बच्न उत्तम हुन्छ।
इन्जिन ब्रेकिङ, वा तपाईंको गति कम गर्न गियरहरू सार्दा, तपाईंको ड्राइभट्रेन, विशेष गरी क्लच र प्रसारणलाई क्षति पुर्याउन सक्छ। यात्रा गर्दा, विशेष गरी उच्च गतिमा, ब्रेक गर्न तपाईंको गियरहरू प्रयोग गर्दा, तपाईंको इन्जिनको आयु छोटो हुन सक्छ। यदि तपाईले धेरै गियरहरू तल पार गर्नुभयो भने क्षति अझ खराब हुनेछ। तपाईंको ब्रेक पेडलहरू तपाईंको गियरबक्समा क्षति हुनबाट जोगाउँदा तपाईंको सबैभन्दा राम्रो साथी हुन् र तपाईंको गति घटाउँदा कलको पहिलो पोर्ट हुनुपर्छ।
हामी सबै मानिसहरूलाई चिन्छौं जसले आफ्नो कार कहिल्यै धुँदैनन् (र सायद तपाईं तिनीहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ), तर आफ्नो कार सफा राख्नु भनेको व्यर्थताको बारेमा होइन: यसले तपाईंको कारको जीवनलाई पनि विस्तार गर्न सक्छ। ग्रिट चल्ने भागहरू र चेसिसहरूमा पुग्छ, जसले द्रुत पहिरन र क्षरण निम्त्याउँछ। चराको थोपाले पेन्टवर्कको साथ विनाश खेल्न सक्छ, र जाडो सडक नुन विशेष गरी संक्षारक हुन्छ (त्यसैले ग्रिटर पछाडि अड्किएमा के गर्ने भनेर निश्चित गर्नुहोस्)।
स्वचालित कार धुने कडा ब्रशहरू छन् जसले राम्रा खरोंचहरू छोड्न सक्छ - साथै तिनीहरूले बिटहरू पनि मिस गर्छन्। जबकि एक हात धुने, वा DIY काम सामान्यतया धेरै राम्रो छ। तपाईंले गहिरो सफा गर्नु अघि पूर्व-कुल्ला गर्नु आवश्यक छ र नरम चामोइसले कारलाई सुकाउनु अघि धुने-अप लिक्विडको सट्टा उचित सफाई समाधान प्रयोग गर्न सम्झनुहोस्। एक वार्षिक पालिसले सुरक्षाको तह प्रदान गर्नेछ र खिया फैलिनबाट रोक्नेछ।
तपाईंको कारको भित्री भागलाई माइक्रोफाइबर कपडाले सफा राख्नु र भुइँको म्याटबाट कुनै पनि फोहोर र टुक्राहरू हटाउन पनि महत्त्वपूर्ण छ। ड्यासबोर्ड प्लाष्टिकमा सुरक्षात्मक स्प्रे प्रयोग गर्दा चर्किने वा विलोपन हुने सम्भावना कम हुन्छ, जबकि उज्यालो दिनहरूमा विन्डस्क्रिनमा सनशेड राख्नुले पनि मद्दत गर्छ। यो स्पष्ट सुनिन्छ तर तपाईंको कार सफा राख्नु र शरीरको काम ध्वनिले यसको अवस्था कायम राख्न र नयाँ गाडी बेच्न र व्यापार गर्न आउँदा यसको मूल्य कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
केही चालकहरू क्लच पेडलमा खुट्टा राखेर ड्राइभ गर्ने झुकाव हुन्छन्। यसले क्लच रिलिज बियरिङलाई क्लच कभरको सम्पर्कमा धकेल्छ, जसले अनावश्यक घर्षण निम्त्याउँछ। समय बित्दै जाँदा, क्लच समय भन्दा पहिले नै बाहिर जान सक्छ। त्यसै गरी, गियर परिवर्तनहरू बीच तपाईंको गियरस्टिकमा आफ्नो हात आराम गर्न लोभ्याउँछ, तर यसले चयनकर्ता फोर्क र अन्य आन्तरिक भागहरूमा दबाब लागू गर्दछ। थपिएको घर्षणले गियर बक्समा झर्ने र आँसुको गति बढाउँछ। आफ्नो हात स्टेयरिङ ह्वीलमा सार्ने र आफ्नो बायाँ खुट्टालाई फुटवेलमा अन्यत्र आराम गर्ने बानी बसाल्ने प्रयास गर्नुहोस्।
जब तपाईले पेट्रोल कम गर्नुहुन्छ तपाईको इन्धन पम्पले तपाईको कारलाई शक्ति दिने प्रयासमा इन्धन ट्याङ्कीको तल्लो भागमा पाइने हावा, भग्नावशेष र तलछटमा तान्नेछ। अवांछित सामग्रीहरूले प्रणालीलाई बन्द गर्न सक्छ र अन्ततः तपाइँको पम्प र फिल्टरहरू कोर्न सक्छ, सम्भावित रूपमा ईन्धन रोक्छ र तपाइँको कार सुरु हुनबाट रोक्छ। डिजेल कारका मालिकहरू कम इन्धन स्तरहरूबाट विशेष रूपमा सतर्क हुनुपर्छ किनभने तिनीहरूको इन्जिनमा भएका शक्तिशाली इन्जेक्टरहरूले प्रणालीमा ठूलो मात्रामा हावा तान्छन्, जसले इन्जिन पल्टिनबाट रोक्न सक्छ। इन्धनको स्तर उच्च राख्दा महँगो मर्मत बिलहरू सडक तलबाट बच्न सकिन्छ।
निर्माताहरूले लाखौं माइलहरू कभर गर्छन् र उनीहरूको कारहरू सकेसम्म भरपर्दो छ भनी सुनिश्चित गर्न अनुसन्धान र विकासमा अरबौं खर्च गर्छन्। त्यसोभए केवल केहि नगद बचत गर्न निम्न गुणस्तरको 'ढाँचा' भागहरूसँग किन खतरामा राख्ने? मौलिक भागहरू प्रयोग गर्नाले तपाईंको कार सडकमा राखेर लामो समयसम्म तपाईंको पैसा बचत गर्न सक्छ। र जब यो विशेष गरी क्लासिक कारहरूमा आउँछ, मौलिक भागहरू प्रयोग गरेर भविष्यको मूल्यको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। तपाईंको कारलाई उत्तम दिनु तपाईंले प्रयोग गर्ने तरल पदार्थहरूमा पनि लागू हुन्छ। ह्यान्डबुकमा सिफारिस गरिएको इन्जिन आयल हेर्नुहोस् र विशेष गरी यदि तपाईंसँग प्रदर्शन कार छ जसलाई 'प्रिमियम' इन्धन चाहिन्छ (जस्तै सुपर अनलेडेड), यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। यसका लागि कार डिजाइन र विकास गरिएको हो।
चेतावनी बत्तीहरू बेवास्ता गर्न सजिलो हुन सक्छ, विशेष गरी जब तिनीहरू उज्यालो हुँदा तपाईंको कारको प्रदर्शनमा कुनै फरक देखिँदैन। जे होस्, समस्याहरू जाँच नगरी छोड्नु भनेको तपाईंको कारको लागि समयपूर्व अन्त्य हुन सक्छ। तपाईंको इन्जिन, ब्रेकिङ र पावर स्टेयरिङ लाइटहरूले महँगो मर्मत बिल वा अझ खराब, असुरक्षित ड्राइभिङ अवस्था निम्त्याउन सक्ने केही अत्यावश्यक गल्तीहरूलाई सङ्केत गर्छ। जब ब्रेक र स्टेयरिङ समस्याहरूले कारको तपाईंको नियन्त्रणलाई कम गर्नेछ, इन्जिन लाइट धेरै कारणहरूको लागि सक्रिय हुन सक्छ।
लूज फिलर क्याप वा अझ बढी सम्बन्धित, दूषित उत्प्रेरक कन्भर्टर सबै एउटै प्रकाशले फ्ल्याग गरिएको छ, र विशेषज्ञहरूद्वारा तुरुन्तै जाँच गर्ने बारे तपाईलाई निश्चित नभएको कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्नु उत्तम हुन्छ। याद गर्नुहोस्, असामान्य कारको आवाजको वरिपरि उही सतर्क दृष्टिकोणले बडमा समस्याहरू हटाउन मद्दत गर्नेछ, र तपाईंको कारको आयुमा वर्षहरू थप्न सक्छ। तपाईंको कारको ड्यासबोर्ड चेतावनी बत्तीको अर्थ के माथि राख्नुहोस्।
तपाईंको कारको आयु थप्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिकाहरू मध्ये एक सबैभन्दा सजिलो पनि हो: नियमित जाँचहरू। आवश्यक DIY निरीक्षणहरूको सूचीले समस्याहरूलाई थप महँगो मर्मत बिलमा विकास गर्नु अघि झण्डा दिनेछ र तपाईंलाई पहिलो स्थानमा उत्पन्न हुने जटिलताहरू रोक्न मद्दत गर्न सक्छ। हामी यिनीहरूलाई सकेसम्म नियमित रूपमा जाँच गर्न सिफारिस गर्छौं, सायद हरेक दुई हप्तामा:
रबर (टायर र वाइपर ब्लेड)
इन्जिन एयर फिल्टर
स्पार्क प्लग (पेट्रोल इन्जिन मात्र)
सफल स्टार्टअपको लागि सिद्धान्तहरू